လူမှုမီဒီယာတိုင်းတာမှုသည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ | Martech Zone
စနေနေ့, ဧပြီ 18, 2009 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
အများကြီးရှိပါတယ် ဆွေးနွေးမှု လူမှုရေးမီဒီယာ (ဘလော့ဂ်အပါအ ၀ င်) နှင့်ရလဒ်များကိုတိုင်းတာသင့်မသင့်၊
ဆိုရှယ်မီဒီယာတိုင်းတာမှုဥပမာမှာကော်ပိုရေးရှင်းဘလော့ဂ်တခုတွင်လှုပ်ရှားမှုခေါ်ဆိုမှုများ၊ တိုးတက်မှုများ (သို့မဟုတ်) လျှော့ချ) ဖောက်သည်ကျေနပ်မှုအတွက်, ဒါမှမဟုတ်တိုးမြှင့် client ကို လက်ရှိထားခြင်း.
ဆိုရှယ်မီဒီယာတိုင်းတာမှုကိုဆန့်ကျင်သူများကတစ်ခါတစ်ရံတွင်တိုင်းတာခြင်းသည်ဖျက်ဆီးခြင်းသို့ရောက်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည် အနည်းဆုံးခြယ်လှယ်။ သူတို့ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ဖောက်သည်များနှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းဗျူဟာများကိုကျင့်သုံးသင့်သည်၊ မှန်သော လုပ်ဖို့အရာ။ ငါလုပ်သင့်တာမှန်တယ်လို့ငါသဘောတူတယ်။ ငါတို့လုပ်သင့်တယ် သက်သေပြနိုင်ရန်အတွက်လူမှုမီဒီယာကိုတိုင်းတာ လုပ်သင့်တာမှန်ပါတယ်
တိုင်းတာမှုအန္တရာယ်သည်မလုံလောက်သေးသောတိုင်းတာမှုများသို့မဟုတ်မပြည့်စုံသောအချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ကောက်ချက်ချခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် variable နှစ်ခုကိုပုံဆွဲ။ ဆက်စပ်မှုတစ်ခုကိုရှာပါက၎င်းသည်တစ်ခုရှိကြောင်းငြင်း။ မရနိုင်သောသက်သေအထောက်အထားကိုမပေးချေ။ ၎င်းသည်ပိုမိုအားကောင်းသောအခြားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတစ်ခုရှိနိုင်သည် is သင်ရိုးရိုးလေးပျောက်ဆုံးနေသောအချက်တစ်ချက်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာများကိုတိုင်းတာရန်ထောက်ခံသူများသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏လူ့ဒြပ်စင်ကိုမကြာခဏပယ်ချလိုက်ပြီး၎င်းကိုကိုင်တွယ်ရန်နှင့်ကိုင်တွယ်ရန်နည်းလမ်းသစ်တစ်ခုအဖြစ်သာရှုမြင်ကြသည်။ ငါ မ သဘောတူတယ် ငါလိုချင်တဲ့သူတွေကိုလိုချင်တဲ့သူတွေကိုသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုရောင်းဖို့ကုမ္ပဏီရဲ့လက်နက်တိုက်တစ်ခုအတွင်းအပြည့်အဝအသုံးချနိုင်တဲ့နောက်နည်းလမ်းတစ်ခုလို့ငါထင်တယ်။
ငါဒီ post ကိုဖတ်တဲ့အခါ လူမှုမီဒီယာတိုင်းတာခြင်းမေ့လျော့ ငါအငြင်းပွားမှုတစ်ခုအငြင်းပွားဖွယ်အချက်ခဲ့ကြောင်း, အနှစ်သာရအတွက်, မှတ်ချက်ပေး။ လူမှုရေးမီဒီယာတိုင်းတာမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ချက်သို့မဟုတ်သင်၏ထင်မြင်ချက်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဂရုမစိုက်ပါ။
ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏သက်ရောက်မှုကိုတိုင်းတာရန်ခက်ခဲသည်၊ သို့သော်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ငါအငြင်းပွားမှုအများစုသက်ရောက်မှုတိုင်းတာဤမျှလောက်ကြိုးစားအားထုတ်မှုလိုအပ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကနေလာထင်ပါတယ်။ သင်၏ထုတ်ကုန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သတ်၍ actions ည့်သည်တိုင်းကိုသေချာစစ်ဆေးပြီးသူတို့၏လုပ်ဆောင်မှုများသည်မလွယ်ကူပါ။ ထို့ကြောင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏ဂုရုအများစုသည်မည်သည့်အတွက်ကြောင့်၊ အဘယ်ကြောင့်နားမလည်၊ ရိုးရှင်းစွာလွန်းပျင်းရိဖြစ်ကြသည်။
သူတို့ကစတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၊ ဖောက်သည်ကျေနပ်မှု၊ ကုန်ပစ္စည်းအမြင်နှင့်စိတ်ထား၊ အတွင်းဘက် ဦး ဆောင်မှု၊ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတန်ဖိုး၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် သင့်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်…သင်ရရှိသော Likes၊ မှတ်ချက်များသို့မဟုတ်အခြားဆိုဒ်များတွင်ဖော်ပြချက်မည်မျှရှိသည်ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ ကြီးမားသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘတ်ဂျက်ဖြင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအားဒေါ်လာနှင့်ဆင့်ဆင့်ဖြင့်မည်မျှအောင်မြင်သည်ကိုတိုင်းတာရန်မလိုဘဲပြည့်စုံသောလူမှုမီဒီယာမဟာဗျူဟာတွင်ပါဝင်ခြင်းကိုကံကောင်းပါစေ။
ကျွန်တော်တို့တိုင်းတာရမယ်။ ကျွန်တော်တို့သက်သေပြရမယ်။ တိုးတက်အောင်လုပ်ရမယ်။
လူမှုမီဒီယာတွင်ရည်မှန်းချက်များနှင့်အစီအမံများကိုအသုံးချခြင်းသည်သင်၏စီးပွားရေးအကျိုးရလဒ်များတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်လူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်များကို အသုံးပြု၍ အခြားသောအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောအရည်အသွေးအားလုံးအားစွန့်လွှတ်ရမည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ဖောက်သည်များနှင့်အလားအလာရှိသောဆက်သွယ်ရေးကိုတိုးတက်စေခြင်း၊ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအတွက်လမ်းကြောင်းပေးခြင်း၊ သင်၏ကုမ္ပဏီ၏နေရာတွင်နေရာယူထားခြင်း၊ သြဇာရှိသူများကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်စကားလုံးများပျံ့နှံ့စေရန်ခွင့်ပြုခြင်း။ ဤအားသာချက်များအားလုံးကိုပယ်ဖျက်စရာမလိုပါ။ သငျသညျနှစ် ဦး စလုံးကမ္ဘာ၏အကောင်းဆုံးရှိနိုင်ပါသည်။
လူမှုရေးမီဒီယာတွေရဲ့ဒီစိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေကိုအသုံးချနိုင်မယ့်ကုမ္ပဏီတွေကိုအမြစ်တွယ်ဖို့သဘာဝလမ်းကြောင်းကိုငါမယုံနိုင်လောက်အောင်ယုံကြည်မှုရှိတယ် တိုင်းတာမှုသည်ကုမ္ပဏီများအားဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ပြန်လည် ၀ င်ငွေအပေါ်နားလည်မှုကိုနားလည်စေရုံသာမကတိုင်းတာမှုသည်ကုမ္ပဏီများအားအမှန်တရားနှင့်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတို့ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ကြောင်းအထောက်အထားများဖြင့်လည်းပေးလိမ့်မည်။ ပါဝါနံပါတ်များ၌တည်ရှိ၏။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာသည် ဆက်လက်၍ တိုးတက်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ဆက်သွယ်ရေးမီဒီယာအသစ်များကိုတိုင်းတာရာတွင်ပိုမိုလွယ်ကူပြီးပိုမိုတိကျသည်။
စဉ်းစားရမည့်အချက်တစ်ခုမှာသင်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာတစ်ခုအဖြစ်သက်သေပြနေခြင်းကြောင့်သာလျှင်ကုမ္ပဏီများသည်ယင်းတို့ကိုစုရုံးလိမ့်မည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ကုမ္ပဏီများသည်လှည့်ရန်ခက်ခဲသောသင်္ဘောများဖြစ်ကြသည်! ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုမ္ပဏီများအားတစ်ခါတစ်ရံအပိုင်းအစတစ်ခုကိုကိုက်ဖြတ်ခြင်း၊ ရလဒ်များကိုသက်သေပြခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏အစီအစဉ်ကိုတိုးတက်စေရန်လုပ်ဆောင်ခြင်းတို့ကိုမကြာခဏပြောဆိုလေ့ရှိသည်။ ပြောင်းလဲမှုသည်ခက်ခဲပြီးအချိန်ယူရသည်။
မှ Ian Ayres အားဖြင့်စူပါ crunchers
ဧပြီ 18, 2009 မှာ 11: 15 pm တွင်
ကောင်းပြီ။ ငါကဤမျှလောက်များစွာသောတိုင်းတာအချက်များကျန်းမာရေးမကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ စမ်းသပ်မှု။ တိုင်းတာသည်။ စမ်းသပ်မှု။ တိုင်းတာသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှသင်၏ SM အားထုတ်မှုများသည်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာလိမ့်မည်။
ဒေါက်တာ Mathew McDougall
ဧပြီ 19, 2009 မှာ 6: 15 AM
ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်ဖော်ပြချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ သင်၏စျေးကွက်ထဲရှိ Digital Marketing Inner Circle ။ ဖော်ပြချက်အတွက် ၀ မ်းသာအားရပြီးသင်၏ဘလော့ဂ်ကို .. ကောင်းတဲ့ပို့စ်များကို ၀ င်ရောက်စစ်ဆေးလိမ့်မည်။
ဧပြီ 20, 2009 မှာ 9: 24 pm တွင်
ငါ post ကိုမှားလမ်းဖော်ပြခဲ့ကြပေလိမ့်မည်။ သငျသညျငါတခါတရံတွင်ထိုပြhaveနာရှိသည်ငါသိ၏။ ဟက်တာ ပို့စ်၏အဓိကအချက်မှာတိုင်းတာမှုမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ဆောင်ခြင်းဟုတ်၊ မဟုတ်မိမိ၏တိုင်းတာမှုနှင့်တိုင်းတာမှုကိုလျစ်လျူရှုရန်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်နှင့်ဒီဇိုင်းတို့ကဲ့သို့သောမမြင်နိုင်သောအရာတစ်ခုကိုတိုင်းတာနိုင်ပါကဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအမှတ်တံဆိပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပုံစံအဖြစ်တိုင်းတာနိုင်သည်။ ငါကုမ္ပဏီများသည်လှည့်ရန်ခက်ခဲတဲ့သင်္ဘောဖြစ်ကြောင်းသဘောတူသည်။ ရေဒီယိုသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစံပြတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့ပြီးနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းလူအချို့ကိုထိုကိရိယာပေါ်တွင်ရောင်းရန်ခက်ခဲသည်။
၎င်းသည်ဤကိရိယာကိုတိုင်းတာရန်အတွက်လိုအပ်သောအလုပ်ပမာဏနှင့်ဘာမျှမဆိုင်ပါ။ သင်ယခုသိသင့်ပါတယ် ၎င်းတွင်မည်သည့်ကိရိယာများကိုအသုံးပြုရမည်နှင့်ပတ်သက်သည်။
ဧပြီ 20, 2009 မှာ 9: 30 pm တွင်
၎င်းသည်ကျိန်းသေသောစိန်ခေါ်မှုဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးစွဲသူများသည်၎င်းတို့၏ဘတ်ဂျက်များသည်မိုက်ခရိုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လက်ဝဲဘက်သို့ဖြတ်တောက်သွားသည်ကိုမြင်တွေ့ရသောကြောင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့်ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၏သက်ရောက်မှုကိုတိုင်းတာရန်ကျွန်ုပ်၏ကိရိယာတန်ဆာပလာတွင် algorithms နှင့် out-of-the-box tools များရှိသည့်နေ့ကိုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်နေပါသည်။
ဧပြီ 20, 2009 မှာ 11: 28 pm တွင်
မေးခွန်းများမှာမည်သည့်တိုင်းတာမှုနှင့်မည်သည့်ကိရိယာများကိုအသုံးပြုသည်၊ မည်သည့်အသုံးပြုသူတွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်နေသည်ကိုမည်သို့ဖမ်းဆီးနိုင်သနည်း။ web analytics အစီအစဉ်များသည်ရည်ညွှန်းအသွားအလာကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောသူများသည်ဆိုဒ်ရှိရည်ညွှန်းထားသော visitors ည့်သည်များ၏နောက်ဆက်တွဲကလစ်နှိပ်ခြင်းများကိုအောင်မြင်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးအောင်မြင်သောဖြစ်ရပ်တွင်သူတို့ပါ ၀ င်ခြင်းမျှော်လင့်နိုင်သည်။
သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ထားသည့်အရာများသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောမှတ်တမ်းတင်ခြင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးရှာဖွေရေးယန္တရား၏ backlinks အညွှန်းကဲ့သို့သော pagerank ကိုတိုးမြှင့်ရာတွင်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်ဟုဆိုနိုင်သည်ဆိုရှယ်မီဒီယာစာမျက်နှာအများစု၏ CMS တွင်မရှိပါ။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ယေဘူယျစက်ရုပ် command သည်“ index, follow” ဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်တွစ်တာတွင်မဖော်ပြပါ။ ကျွန်ုပ်၏ RT အတွက်ကုဒ်ကိုကြည့်ပါကဤဘလော့ဂ်ကိုကိုးကားပါ။
bot သည် rel =” nofollow” ကိုညွှန်ကြားထားသည်ကိုတွေ့ရသည်။ Tweeter sidebar ရှိ“ ပိုမိုသိရှိလိုသော URL” link အတွက်ဤအချက်သည်မှန်ကန်သည်။
တနည်းကား, ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် link ကိုမလိုက်ရန်ညွှန်ကြားထားသည်။
ဧပြီ 22, 2009 မှာ 11: 08 AM
ပိုပြီးသဘောတူမရနိုင်ပါ! ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းကိုအောင်မြင်စေရန်တိုင်းတာခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ လူအများစု (သို့) ကုမ္ပဏီအများစုသည်လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သောကြောင့်တစ်ခုခုလုပ်ရန်ခဲယဉ်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုအကျိုးပြုသည့်လှုံ့ဆော်မှုပုံစံအမျိုးမျိုးရှိတတ်သည်။ တိုင်းတာခြင်းသည်ထိုလှုံ့ဆော်မှုကိုခိုင်လုံစေပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနားလည်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုသည်။
ဧပြီ 27, 2009 မှာ 3: 50 pm တွင်
တိုင်းတာခြင်းလူမှုမီဒီယာနှင့်ပတ်သက်။ ငါ့ဆောင်းပါးအပေါ် pingback အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါဒါကိုလုံးဝသဘောတူတယ် လူမှုမီဒီယာကိုတိုင်းတာရန်တွန့်ဆုတ်နေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်အံ့အားသင့်မိသည်။ ဖောက်သည်များနှင့်အပြည့်အဝထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်သည်လိုအပ်သည်ဟုထင်ပါသည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုတိုင်းတာသည်ဖောက်သည်များနှင့်ဆက်သွယ်ရန်နှင့်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်အကြောင်းပြောဆိုရန်သူတို့အသုံးပြုနေသောမည်သည့်နယ်ပယ်နှင့်လမ်းကြောင်းများကိုရှာဖွေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။